XOG-RASMI AH: Ciidamo ka socda Eritrea oo Muqdisho ku soo wajahan. | gobolada.com
XOG-RASMI AH: Ciidamo ka socda Eritrea oo Muqdisho ku soo wajahan.
Dec 14, 2018 - jawaab
Iyadoo maalinka hor magaalada Muqdisho booqasho laba maalin ah Muqdisho ku joogo madaxweynaha kali taliska Eritrea Issias Efawerki ayay sida xogta aanu ku helnay madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ka dalbaday inuu ka dhabeeyo ciidamo uu u balan qaaday Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib heshiiskii saddex geesoodka ay wada gaareen hogaamiyayaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya.
Ciidamadan ka imaan doona dalka Eritrea ayaa loogu tagalay inay sugaan Amaanka magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, isla markaana si toos ah uga hortagaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo garab ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka oo siyaasad ahaan ka horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale Ciidamadan waxay hordhac u yihiin ciidamo kale oo la filayo inay soo gaaraan magaalada Muqdisho kuwaasoo dowladda Itoobiya keenayso Muqdisho, kuwaasoo laga yaabo inay badali doonaan ciidamada ka socda Midowga afrika ee horay u joogay Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya ayaa iska kaashan doona bilowga howlgalo lagu sugayo amaanka magaalada Muqdisho iyo afgooye ka hor inta aysan u gudbin dalka intiisa kale.
Sida xogta aan helnay ay tilmaamayso ciidamadan waxaa horkici doona ciidamo ka tirsan dowladda federaalka hase yeeshee si gaar ahaaneed u hoos taga Farmaajo iyo Kheyre, waxayna ka talaabi doonaa labada Shabeele, Bakool, Hiiraan iyo Galgaduud.
Lama oga sida loogu guuleysan doono howlgalka lagula dagaalamayo Al-shabaab iyo siyaasiyiinta ka fikirka duwan dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo iyadoo aanu ogsoon nahay imaatinkii ciidamada Itoobiya ee magaalada Muqdisho raadka madow ay ku reebtay guud ahaan shacabka Soomaaliyee gaar ahaan xasuuqii ka dhacay magaalada Muqdisho mudadii ay joogeen ciidamada Itoobiya ka hor inta aysan ka bixin Soomaaliya.
Ugu danbeyntii lama oga qorshahan uu qaadayo madaxweyne Farmaajo inay wax ka ogyihiin beesha Caalamka, hase yeeshee waxaa si toos ah arrimahan uga dhiidhiyey gaar ahaan heshiiskii uu la galay dowladdaha Itoobiya iyo Eritrea qaar ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya kuwaa oo mooshin ka dhan ah madaxweyne Farmaajo u gudbiyey guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, mooshinkaasoo abuuray xiisad siyaasadeed ka aloolsan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
W/Diyaariyey: Bile Maxamed Cabdi (Bile Baastey).